Définition malgache ( Tamarindus indica, Latina) Hazo lehibe amin'ny antokon'ny légumineuses, maniry indrindra ao amin'ny faritany mafany andrefana sy atsimo. Mety ho vaventy tokoa izy fa mahatratra hatramin'ny 3 na 4 metatra ny manodidina ny vatany. Betsaka ny raviny sady midoroboka be sy matevina hany ka mahafinaritra ery ny mialokaloka eo am-potony amin'ny andro mafana. Ny fanjan'ny kily dia vony na vonivony: ny voany dia ireny efa amidy betsaka aty afovoan-tany, dia ny voany (gousse) efa masaka. Mafy ny hoditr'io voany io ary misy nofony manja-mena mamimamy maharikivy, ataon'ny ankizy mpihinina azy hoe voamadilo. Mafy kosa ireo voany madinika maintimainty anatiny. Efa miely ao amin'ny tany mafana rehetra ny kily sady mora maniry rahateo fa ny voany ihany no ambolena. Tany Afrika dia nahita betsaka izahay ao amin'ny alabe manelanelana an'i Brazzaville sy Pointe-Noire (1960). Raha masaka tsara sy maina am-potony ny voan'ny kily (gousse) ka tsy mihintsana dia maharitra ela tokoa -- am-bolana azy -- tsy simba, tsy lo. Ny voany tanora indray, izany hoe mbola tsy misy ireo voa madinika ao anatiny, dia ataon'ny mpitia azy rougail, ary ny efa masaka kosa dia samy manamboatra araka izany izay itiavany azy avy ny mpihinana, toy ny Karana izay mampiaraka azy amin'ny "karia" (vovoka vonivony tsara fofona fanatsiroan-kanina). Ny Afrikana kosa dia manamboatra zava-pisotro avy aminy izay asiany tantely sy voasarimakirana koa. Eo amin'ny volana novambra ka hatramin'ny volana fevrie no favokaran'ny kily na madiro.
Traduction anglaise The tamarind tree [Richardson 1885, Hallanger 1973]
Traduction française Le tamarinier; le fruit du tamarinier [David 1952, SLP 1986, Hallanger 1974, Rajaonarimanana 1995]
Traduction allemande Tamarinde; Tamarindebaum [Bergenholtz 1991]
1 Nipetaky amy kily iny eo, mandisa olo reo ambany eo [Gueunier: Contes]
2 Ny hazo lehibe tazana aorian'ny olona, dia kily (madilo) maniry betsaka eo amin' ny faritra, ary manana ny lanjany tokoa amin'ny fiainan'ny Masikoro. [Razafiarivony: Harivolana]